Gudoomiyihii Warta-Nabadda “Muuqaalkeyga wuu is badalay laakiin qalbigeygu isma badalin” -News and information about Somalia
Home Warkii Gudoomiyihii Warta-Nabadda “Muuqaalkeyga wuu is badalay laakiin qalbigeygu isma badalin”
Guddoomiyaha degmada Warta-Nabadda ee gobolka Banaadir Seynab Xaabsey ayaa dalka dib ugu soo laabatay, kaddib dhaawac halis ahaa oo ka soo gaaray qaraxii 24-kii July ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar.
Seynab oo markii ay ka soo dagtay garoonka Aadan-Cadde la hadashay warbaahinta Qaranka ayaa wacad ku martay in aysan dalkaan uga cabsa doonin waxa ay ugu yeertay Argagixiso inta ay Naftu ku jirto.
Guddoomiye Seynab oo jir ahaan uu raadad badan ku reebay qaraxii is-miidaaminta ahaa ee lagu dilay mas’uuliyiin uu ku jiray guddoomiyihii gobolka Banaadir Marxuum Yariisow ayaa shacabka Soomaaliyeed uga mahad celisay garab istaagooda intii ay dhaawaca aheyd.
Guddoomiyaha ayaa ka mid aheyd mas’uuliyiintii maamulka gobolka Banaadir ee dhaawacooda loo qaaday magaalada Dooxa ee dalka Qatar, si halkaas loogu soo dabiibo, waxaana xusid mudan in Seynab ay ka mid aheyd dadkii dhaawacyada ugu daran ay ka soo gaareen qaraxaas.
“Waxaa laga yaabaa in muuqaalkeyga uu is badalay, balse isma badalin qalbigeyga wax yarna Allaha ka dhigee, Wlh waxaan ku caafimaaday ducadiina, waxaan dalka u halgami doonaa inta aan noolahay” ayey tiri guddoomiyaha degmada Warta-Nabadda.
Intii ay ku jirtay qaban qaabada safarka ay ugu soo laabanaysay dalka ayaa waxa ay sheegtay in qaar ka mid ah eheladeeda ay ka naxeen, isla markaana ay uga yimaadeen su’aalo ah “Ma-dalkii aad sidaan ku soo noqotay baad ku laabaneysaa, iska joog halkaan ayaan shaqo kaaga raadinaynaaye”.
Balse guddoomiye Seynab ayaa sheegtay in ay aaminsantahay qof walba haduu ka tago dalka in Jiilka mustaqbalka ka leh dalkaan ay sidaan ku sii jiri doonaan.
Caga jugleyn iyo isku day kasta oo ay ku carqaladeynayso argagixisadu ayaa waxa ay sheegtay in aysan ka reebi doonin halgankeeda u adeegidda dalka, inta ay Naftu ku jirto.
Previous articleMaxkamadda Sare oo ka hadashay dacwadii Hilimo Qaran ee xukuumadda
Next articleTaariikda Kacaanka Soomaaliya sida uu ku bilowday iyo halka uu ku dhamaaday
Madaxweyne Deni Oo Ka Soo Horjeestay Sharciyo Badan Oo La Ansixiyay